Fihanaky ny coronavirus :: Zazavavy malagasy iray, 13 taona, voan'ny Coronavirus • AoRaha
Fihanaky ny coronavirus Zazavavy malagasy iray, 13 taona, voan’ny Coronavirus
Miovaova ny isan’ny olona voatily sy voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 eto Madagasikara. Olona fito vaovao indray no voaporofo fa voan’ny aretina Coronavirus eto amintsika, hatramin’ny omaly antoandro tamin’ny iray ora, ka nampiakatra ny fitambaran’ny tranga voamarina ho 93 manerana ny Nosy. Isan’izany ny zazavavy iray, 13 taona. 82 no marary sy manaraka fitsaboana any amin’ny hopitaly. 11 kosa no sitrana ka efa namonjy ny trano fonenany. Ankoatra izay dia fantatra fa nihatsara ny toe-pahasalaman’ny marary iray izay nisedra fahasemporana, afak’omaly.
Tokony hampitombo ny fahamailoana eo amin’ny tsirairay hatrany ny fisian’ireo marary vaovao avy amin’ny fifampikasohana tamin’ireo olona voan’ny Coronavirus avy any ivelany. Efatra no isan’ny olona voamarina fa mitondra ny tsimok’aretina Covid-19 vokatry ny fifaneraserana tamin’ny olona marary. Zazavavy malagasy iray, 13 taona, kosa tao amin’ireo nody an-tanindrazana avy any ivelany, saingy voatily fa voan’ny aretina Coronavirus.
Voalaza fa teto Antananarivo sy tany Toamasina no nahitana an’ireo tranga dimy vaovao. “Efa narahi-maso teny amin’ny tobim-pahasalamana ilay zazavavy, 13 taona, no izao nahitana ny tsimokaretina izao. Nandeha tamin’ny zotra farany AF 934 izy« , hoy ny Pr Vololontiana Hanta Marie Danielle , mpitondra tenin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny » Covid-19″ (cco) tao amin’ny fahitalavi-pirenena , omaly.
Etsy ankilany, nanamafy itsy farany momba ny fisian’ireo olona iraika ambin’ny folo sitrana tanteraka rehefa avy nanaraka ny fitsaboana ny aretina Coronavirus. Olona efatra vaovao no sitrana manampy an’ireo fito teo aloha, omaly. » Efa nihatsara ny toe-pahasalaman’ilay olona iray tany Toamasina izay nahitana soritr’aretina sarotra« , hoy indray izy.
Nomarihiny fa paik’ady iray, tena mitovy, no hoentin’ny mpitsabo rehetra manerana ny Nosy, hitsaboana an’ireo olona rehetra voan’ny Coronavirus eto Madagasikara.
Ady amin’ny aretina « coronavirus » :: Tsirim-panantenana ny fikarohana fanafody eto Madagasikara